Miandrandra fararano… | NewsMada
Ny rano aloha dia misy, ary mbola ho lavitra izay ho farany… Miakatra manaraka ny ranon’i Sisaony sy Ikopa ny vidin-javatra rehetra eny an-tsena. Ny rehetra mihitsy! Ny hena, taloha aza tsy taka-bidy, mainka ny amin’izao fotoana izao. Ny vary, efa mahazatra ny fisondro-bidiny rehefa fahavaratra. Na ny anana filaofan’ny sahirana aza, simban’ny orana sy ny havandra ka sady lasa lafokely no kely lafo…
Tsy vaovao anefa izany, fa fiainana isan-taona, rehefa fotoam-pahavaratra. Takontakona kely izy anatin’ny fetin’ny Noely sy taom-baovao, fa mihatra am-bilany kosa ny tsy fisiana rehefa afaka ny herinandro voalohan’ny volana janoary! Iainana isan-taona, fa tsy zatra ary tsy mahazaka foana ny ianjadiany.
Miakatra ny rano eny amin’ny tanàna ambany. Hatahorana hihotsaka kosa ny eny amin’ny tanàna ambony. Mbola olana hafa sedraina foana, isaky ny fahavaratra ihany koa izany. Manampy ireo rehetra ireo ny lavaka amin’ny arabe, izay toa miforona isa-minitra. Rehefa vanim-potoana toa izao tokoa mantsy, toa hita miharihary izany ny fahasahiranan’ny isan-tokantrano. Vokatry ny firobarobana tamin’ny fety?
Antananarivo tsy mamboly anefa izany… Ny tantsaha izao no tena miandrandra fararano, ho valin-kasasarany amin’izao fotoam-piasana izao. Izay ilay voam-bolana: valin-kasasarana. Ny manana anton’asa no miandrandra azy. Mba te hisitraka izany koa anefa ireo tsy an’asa fa miezaka miady amin’ny fiainana. Anisan’ireny ireo mpivarotra amoron-dalana (sy ireo am-povoan-dalana). Porofon’ny fahantrana ny fahamaroan’izy ireny, hoy ny filazan’ny manam-pahaizana ara-toekarena.
Tsy hifamendrofendro lalandava eto foana akory, fa afaka mifankahery ihany koa. Ny fihenjanana amin’ny fanarahan-dalàna androany, antoky ny fandrosoana rahampitso. Eny, na dia manohintohina ny fiveloman’ny olona maro aza. Mba tokony hojerena koa anefa izay hanampiana ireo voadoana, hananany fitokisana (na dia bitika monja aza) amin’ny mpitondra.